आजको सिरिया | Hamro Patro
बिहानको ०७ : १२
Suyog Dhakal - Feb 27 2018
अब सीरियन युद्ध दोश्रो विश्वयुद्ध भन्दा धेरै लम्बिइसकेको छ । सिरिया बाहेक विश्वका कुनैपनि कुनामा सुरक्षा खोज्दै सीरियन शरणार्थी युरोप अनि अन्य देशहरुमा जीवनको जोखिम मोल्दै भौतारी रहेका छन् । युएनएचसिआर को प्रतिवेदन अनुसार ५५ लाख सीरियन शरणार्थीहरु दर्ता भएका देखिन्छन् । लेवनान र टर्कीले सबैभन्दा धेरै सीरियन शरणार्थीहरु राखेका छन् ।
फेब्रुअरी २६ सोमबारका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनो गुट्रीसले सिरियामा सुरक्षा परिषदको कार्य लागू गर्न अनि कम्तीमा ३० दिनको युद्धबिराम लागू गर्न आव्हान गरेका छन् । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा बोल्दै महासचिवले पूर्वी घोउटा सिरियालाई पृथ्वीको नर्कको संज्ञा दिएका छन् । घोउटामा अहिले सीरियन सरकारका हवाइजहाजहरुले बमबारुद आक्रमण गरिरहेका छन् । घोउटाकै बिभत्स फोटोहरु अनि मानव चिहानहरु अहिले विश्वभरिकै सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक शेयर गरिँदै युद्ध रोक्न दबाब भइरहेको पनि छ ।
आखिर के भएको हो त सिरिया मा?
यस वर्षको मार्च महिनामा सिरियाको युद्ध ८ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यिनै ७ बर्षमा ४६५००० बढि सीरियन नागरीकहरुको मृत्यु भएको छ । यता एक करोड बढि सीरियनहरु आफ्नो घरबार विहीन भएका छन्, देशको आधा जनसख्याँ नै आफ्नो घरबार विहीन भएका हुन् । सिरियाको युद्धको इतिहास सन् २०११ बाट सुरु हुन्छ, जब इजिप्ट अनि ट्युनीसियाको आन्दोलनको परिणामबाट सुरु हुन्छ । यिनै आन्दोलनहरुले प्रो डेमोक्रेटिक सीरियनहरुलाई प्रेरित गरेको हो । त्यसै वर्षको मार्चमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन सिरियामा सुरु भएको हो । भन्नेहरुले यस आन्दोलनलाई पश्चिमाहरुको समर्थनले भएको र असादको विरोधमा भएको भनेर पनि आरोप लगाएका छन् । असाद अहिलेका सिरियाका राष्ट्रपति हुन् जो धेरै अघिदेखि पश्चिमा लगायत अन्य धेरै देशहरुका आँखाका तारा र दुश्मन मानिन्थे । सन् २०११ मा प्रजातन्त्रको नाममा गरिएको आन्दोलनमा सिरियामा एक जना १३ वर्षे बालकलाई अत्याधिक दुव्र्यवहार गरेर हत्या गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः बसर अल असादको सरकारले निर्ममतापूर्वक हत्या अनि दमन गरेको अनि गर्दै आएको छ ।
फ्री सीरियन आर्मी
जुलाई सन् २०११ मा सीरियन आर्मीको दमन विरुद्ध फ्री सीरियन आर्मी नामक समुह गठन भयो । यसैसाथ देशमा संगठनात्मक विरोध क्रम अनि सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । सिरिया विद्रोहको अर्को पक्ष सेक्टेरियन विभेद पनि हो । सिरियाका अधिकांश जनताहरु सुन्नी मुसलमान हुन् तर सिरियाको सुरक्षा अनि प्रतिरक्षामा भने सेक्टेरियनहरुको बाहुल्यता छ, अलावी सेक्ट भनिने यस धारका सदस्य अहिलेका राष्ट्रपति असाद पनि हुन् । असादका बुवाले सन् १९८२ मा सैनिक परिचालन गरेर मुसलमान भातृत्वमाथि धावा बोलेका अनि हजारौंको सेक्ट र नन् सेक्ट विभेदका कारणले हत्या गरिएको बताइन्छ । त्यसपछि सिरियामा सेक्ट विभाजन बढेर गएको हो । सन् २००७ देखि सन् २००९ सम्म सिरियामा भयंकर खडेरी र सुख्खापन भएको थियो, यसकारणले पनि जर्जर भएको सीरियन अर्थतन्त्र अनि बसाईसराईको क्रम त्यसपछि झनै बढेर गयो । अहिले आएर सिररियामा विद्रोहीहरु, आईसीस, अमेरिका अनि रुसको एउटा भयंकर युद्धमैदान बन्न गएको छ ।
सिरिया युद्धमा वैदेशिक हस्तक्षेप
ईरान, ईराक अनि लेवनानका सरकारले असादलाई समर्थन गरेका छन् । यी देशहरुमा सीया समुदायका मुसलमानहरुको बाहुल्यता छ । जबकि टर्की, कतार, साउदी अरब लगायतका सुन्नी बहुसङ्ख्यक भएका देशहरु असादको सरकार विरोधमा उत्रिएका छन् । सन् २०१६ पछि त टर्कीले आफ्नो सिमा क्षेत्रमा अमेरिका समर्थित कुर्दिश सैन्य दस्ता लगायत आईसीसको प्रतिरोधमा विभिन्न सैन्य कारवाही नै गरेको छ । उता अमेरिकाले भने असादको सैन्य दस्ता विरुद्धमा विभिन्न विद्रोही समुह गठन अनि तिनलाई हातहतियार प्रवाह र प्रविधि सुसम्पन्न गराउँदै आएको सन् २०१४ देखि नै हो । इज्रायलको युद्ध विमानलाई यसैवर्ष फेब्रुअरी महिनामै हजिबोल्लाह लगायत असाद सर्मथित दस्ताले झारेका हुन् । ईज्रायल अनि अमेरिका सिरियाको मुद्दामा एकै धारमा देखिएको छ । अमेरिकाले पटक पटक अनौपचारीक रुपमा रुसको असाद प्रतिको समर्थनलाई उठाउने गर्दछ, आउनुहोस् अब कुरा गरौं रुसको संलग्नताका बारेमा । सन् २०१५ मा रुसले बम्बिगं मिसन सुरु गर्यो तर उसको यो मिसन सिरियाको असाद सरकार विरुद्ध नभई त्यहाँ रहेका अन्य विद्रोही समुह विरुद्ध थियो । यस्ता असाद विरुद्धका अधिकांश समुहहरु अमेरिकाले सहयोग गरेका समुहहरु थिए । उता संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भने सदैव चीन र रसियाले सिरियाबाट पश्चिमाहरुलाई हटाउने पक्षमै वकालत गरेको पाइन्छ ।
सिरियामा शान्तिका कदमहरु
सन् २०१२ मा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा सीरियन सरकारपक्ष अनि विद्रोही बीच वार्ता भएपनि असफल भएको हो । सन् २०१७ मा पनि यस्तै शान्ति बैठक बसे तापनि संक्रमणकालीन सरकारमा असादको संलग्नताको विषयमा कुरा नमिलेपछि फेरि हात लाग्यो शुन्य भएको हो ।
पूर्वी घोउटामा रुसी विमानका साथ सहायता प्राप्त सीरियन सरकारी सैन्य दस्ताले विद्रोही विरुद्ध व्यापक हमला गरेका छन् । यस हमलामा सैयौं निहत्था सर्वसाधरण मारिएका छन् । सन् २०१३ देखि नै यस क्षेत्र द्वन्द्वग्रस्त छ । राजधानी दमास्कस नजिकै भएपनि यस क्षेत्रमा विद्रोहीको अझै पनि बाहुल्यता छ, सरकारीपक्षले यस संवेदनशीलतालाई जसरी पनि हटाउन चाहन्छ । उता अमेरिकाले राष्ट्रपति बाराक ओबामा कै समयबाट सिरियालाई जैविक हतियार प्रयोगको आरोप लगाँउदै आएको छ ।
अब सीरियन युद्ध दोश्रो विश्वयुद्ध भन्दा धेरै लम्बिइसकेको छ । सिरिया बाहेक विश्वका कुनैपनि कुनामा सुरक्षा खोज्दै सीरियन शरणार्थी युरोप अनि अन्य देशहरुमा जीवनको जोखिम मोल्दै भौतारी रहेका छन् । युएनएचसिआर को प्रतिवेदन अनुसार ५५ लाख सीरियन शरणार्थीहरु दर्ता भएका देखिन्छन् । लेवनान र टर्कीले सबैभन्दा धेरै सीरियन शरणार्थीहरु राखेका छन् । अबका सिरियामा युद्ध बन्द भएपनि देशको पूर्ननिर्माणमा अत्याधिक समय लाग्ने पक्का छ । अहिलेको अवस्थामा सिरियामा सरकारी असाद समर्थित दस्ताहरुले विद्रोही माथि हवाई आक्रमण गरिरहेका छन् र सर्वसाधरणहरु मरिरहेका छन् । असादका दुई रुप संसारले देखेका छन्, कसैले उनलाई तुलनात्मक रुपमा कम तानाशाह अनि सिरियाका रुचाइएका अनि पश्चिमा विरुद्धमा डटेर अघि आउन सक्ने रुसका समर्थक शासक भन्दछन् । अनि कतिले भने असादलाई तानाशाह, क्रुर र अतिवादीको संज्ञा पनि दिएका छन् । जे होस् ? सिरिया आज मुस्किलमा छ । सिरियामा शान्ति आवोस् ।